San Htun's Diary: ဖီလင် ၃၁...
ဒါမျိုးလေးတွေဆို အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ် စန်းထွန်းရေ။ ချက်ဖို့ပြုပ်ဖို့ ပျင်းတာနဲ့ သွားမလှူဖြစ်တော့ဘူးလား စန်းထွန်းရယ်။ မိုက်ပါ့။ ဆိုင်က ၀ယ်ပြီး သွားကပ်လည်း ဖြစ်တာပဲ ဥစ္စာ။
ခေါင်းစဉ်လေးလည်း သဘောကျတယ်။ အဲဒီတိုင်းလေး ရေးချင်သေးတယ်။ ဟိုတစ်ခါတုန်းကလည်း စာရေးခြင်းဆိုတာလည်း ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်သေးတာ စန်းထွန်းရေ။
မပျင်းရအောင် ရန်ဖြစ်ဖြစ်ပေးတဲ့ မောင်မောင်။ ဟုတ်တယ် စန်းထွန်းရေ တစ်ခါတစ်လေ ရန်လေးဘာလေးဖြစ်ပေးမှ (အကြီးအကျယ်တော့မဟုတ်) ပျော်စရာကောင်းတာ။ နို့မို့ရင် ပျင်းစရာကြီးရယ်။
ဂျီ၊ စီ၊ ဒီ ကီးသုံးခု သိနေပြီဆို အတော်ဟုတ်နေပြီပဲ၊ သီချင်းတွေ အများကြီး တီးလို့ရနေပြီ ညီမစန်းထွန်းရဲ့…၊ ကိုယ်တိုင် တီးဆိုထားတဲ့ မွေးနေ့သီချင်းလေးလည်း နားထောင်သွားတယ်၊း)
စာစုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ အထွေအထူး အကြံပေးစရာ မရှိပါဘူးဗျာ၊ အားလုံးဖတ်လို့ ကောင်းတယ်၊ အခုအတိုင်း လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ဆက်ရေးဖို့ပဲ ပြောချင်တယ်၊
၃၁ ဘုံမှာနေပြီး ၃၁ နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက် အခက်အခဲတိုင်းကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး ရဲရင့်အေးချမ်းတဲ့ စိတ်နှလုံးနဲ့ ကျန်းမာ၊ ပျော်ရွှင်ပါစေ-လို့ ဆုမွန်ခြွေလိုက်ပါတယ်ဗျား…။း)
Happy birthday san tun , with many love eicho
Khin Cho Lwin said...
ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကကုိုယ့်စိတ်ကရေးချင်နေတာကိုရေးချမှပုိုပြီးကျေနပ်မိမယ်ထင်တယ်။ စာဖတ်သူတွေက လူမျိုးစုံ၊ နောက်ခံမျိုးစုံ အားလုံးအကြိုက် သုို့ မဟုတ် အများကြိုက် လိုက်ရေးရင်စန်းထွန်းပီသတော့မှာမှုတ်ဖူးထင်တယ်။
စီ ဒီ ဂျီ နဲ့ ကုိုသီချင်းတွေအများကြီးတီးလို့ ရပါပြီ။
ကုိုယ်အရင်ကလက်ချောင်းထိပ်တွေအသားမာတက်တဲ့ထိနေ့ တုိုင်းတီးခဲ့တယ်။ အသက်ကြီးလာတော့မတီးဖြစ်တော့ဘူး။ သီချင်းတွေလည်းမမှတ်မိတော့ဘူး။
ကုိုယ်မှတ်မိသလောက်ဆုို ထီးစုိုင်ရဲ့ နွေဥသြတုို့ 
I love you more than I can say တုို့ 
အဲဒီကီးလေးတွေနဲ့ တီးလို့ ရမယ်ထင်တယ်။ A တုို့C7 D7 G7 လေးတွေတော့နဲနဲပါမယ်ထင်တယ်။ သေချာတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ကုိုယ်လည်းလွယ်တာလေးတွေစတီးခဲ့တော့အဲဒီ သီချင်းတွေတီးခဲ့တာမှတ်မိနေတယ်။
ကုိုယ်လေ ဂျပန်စာနဲ့ စကားလည်းသင်ခဲ့တယ်။ ဘာမှမသိတော့ဘူး။
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ စကားတောင်သုံးနေရလို့ မမေ့တာဖြစ်မယ်။
ကုိုယ်ကဖဘကို သာလာယံဇရပ် လိုမျိုးထင်မိတယ်။ လူတွေက၀င်လိုက်ကြထွက်လိုက်ကြနဲ့ လေ။
မွေးနေ့ တင်မကနေ့ စဉ်ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Happy Belated Birthday ညီမလေး... ဆုတောင်းနောက်ကျသွားတာ ဆောရီးပါ...
ဖီလင် ၃၁ လေးဖတ်မိလို့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီးတွေ့လိုက်ရတ်စန်းထွန်းရေ
ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်နားဝင်ချိုနေတယ်လို့လခံစားရတယ်....စိုးမြတ်သူဇာရေးတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့.......အမိုးသမီးတယော်ရဲ့ အလှပဆုံးအချိန်ဟာ ၂၅နှစ်ကနေ ၃၅နှစ်အတွင်းတဲ့ ဆရာဝန်တယောက်ကလဲ အဲလိုရေးထားတာဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်
ဘုန်းဘုန်းတောက်းဟုတ်သား ဆိုင်ကဝယ်ပြီး သွားကပ်လည်း ရသား
ကိုညီးအဲဒီတပုဒ်တောင် ကောင်းကောင်းမတီးတတ်သေးဘူး
EiCho, Khin Cho Lwin, Nay Myo : Thanks
မမအိုင်အိုရားအရှည်ကြီးမန့် လို့ကျေးဇူးကမ္ဘာ
အစ်မသက်ဝေးနောက်မကျသေးဘူး စလုံးမှာ တနင်္ဂလာမနက်ပေမဲ့ဒီမှာ တနင်္ဂနွေညပဲရှိသေးတယ် မွေးနေ့ အချိန်မှီပါတယ်..
မဂျက်းဒါဆို နောက်ထပ် ၄ နှစ် ကျန်သေးတယ်..
Happy Belated Birthday ပါ မစန်းထွန်း..
Happy Belated Birthdayပါအမစန်းထွန်းရေ
အင်း...ကိုယ့်လူ မငယ်တော့ဘူး...အရင်ကလို စိတ်ထင်တိုင်း မကြဲနဲ့ စိတ်လျှော့စိတ်လျှော့...ကိုယ့်နောက်ပါမှာလေးတွေ လုပ်ဦး ( ခပ်တည်တည်နဲ့ တရားချလိုက်ဦးမယ်...ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာတွေ သူများလုပ်ခိုင်းရတာ အရသာ အတော်ရှိသကိုး...း)
( ၂၅.၁၁.၂၀၁၃ )
TTW : အစ်ကိုရေ ကျေးဇူးပါ ခင်ညား..
သူးတောလားတွေ ကြုိုက်တယ်ဆိုလို့နောင်တောတွေ လားဖြစ်ခဲ့ရင် တောလားတွေ ရေးပါဦးမယ်
ဆြာဟန်းသူကျ မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့တူများကို လုပ်ခိုင်းတယ်း) ကဗျာလေးကြိုက်တယ်